लेखाव्यवसायमा ‘दलाल’ सक्रिय, यी तस्वीरले गिज्याइरहेछन् आइक्यानलाई ! « Pahilo News
लेखाव्यवसायमा ‘दलाल’ सक्रिय, यी तस्वीरले गिज्याइरहेछन् आइक्यानलाई !
प्रकाशित मिति : 1 July, 2016 4:14 am
१५ असार । नेपाली लेखा व्यवसायीहरुलाई नियमन गर्ने निकाय नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) को कामकार्वाही फितलो हुँदा लेखा व्यवसायमा गैर लेखापरीक्षकहरुको सक्रियता बढेको छ । आइक्यानको नियमविपरीत दलालहरु मनपरी ढंगले काम गरीरहेका छन् भने सेवाग्राही तिनै गैर लेखाव्यवसायीहरुबाट ठगिइरहेका छन् ।
आइक्यानको नियमविपरीत पत्रपत्रिकामा बिज्ञापन छापेर, फेसबुकमा प्रचार गरेर र भिजिटिङ कार्डमा आइक्यानमा विवरणहरु पेस गरेर गलत काम गर्नेहरु सल्बलाए पनि नियमन गर्ने निकाय भने कानमा तेल हालेर बसेको छ । नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स ऐन– २०५३, अनुसार लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्ने भन्दै प्रचारात्मक काम गर्न पाइँदैन । तर, आइक्यानको सदस्य नै नभएकाहरुले गलत काम गरेको पाइएको छ । यस बिषयमा आइक्यानले केही समयअघि यस्तो कार्य नगर्न र गरेको पाइएमा कार्वाही गर्ने चेतावनीसहितको सूचना पनि जारी गरेको थियो । तर, उक्त सूचना पालना भइरहेको छैन ।
नियमविपरीत भड्किलो प्रचार
माथिको तस्वीरलाई एक पटक राम्रो सँग नियाल्नुहोस् । काठमाडौँ चावहिलमा रहेको एक लेखापरीक्षण फर्मले राखेको सटर बिज्ञापन आइक्यानको मापदण्ड विपरित छ । अझ त्यहाँ स्पष्टसँग आफूहरुले ट्रायल ब्यालेन्स, पीएल एकाउन्ट जस्ता ’फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट’ हरु बनाउने सेवा पनि दिने उल्लेख छ जब कि त्यो लेखापरीक्षण फर्मको काम होइन । आइक्यान ऐनमा यस्तो बिज्ञापन राख्न नपाइने स्पष्ट व्यबस्था छ । यस विषयमा उक्त फर्मका संचालकलाई सम्पर्क गर्दा गल्ती भएको भन्दै यसलाई समाचारको बिषय नबनाई दिन आग्रह गरे । आइक्यानका एक सदस्यले आइक्यानमा लिखित उजुरी परेमा यस्ता फर्महरुलाई कारवाही गर्न सक्ने बताए ।
ट्राभल एजेन्सी समेत गर्छन् दलाली
पहिलो न्युजलाई प्राप्त यो एक ट्राभल एजेन्सीको भिजिटिङ कार्ड हो । मिलिजुली ट्राभल्स प्रालिका नाममा दर्ता भएको यो कम्पनीले आफूले दिने सेवाहरुमा लेखापरीक्षण समेत गरिने उल्लेख गरेको छ, जुन सरासर आइक्यानको नियमविपरीत छ । आइक्यान ऐन, २०५३ ले स्पष्ट रुपमा बिज्ञापन गरी लेखापरीक्षण सम्बन्धी कामको जानकारी दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ भने आइक्यानबाट ’सर्टिफिकेट अफ प्राक्टिस’ नलिएकाहरुले लेखापरीक्षण सम्बन्धी काम गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, आइक्यानको यो नियमविपरीत काठमाडौँका विभिन्न ट्राभल एजेन्सीहरुले लेखापरीक्षणको दलालका काम गरिरहेका छन् ।
कन्सलटेन्सी नाममा लेखापरीक्षणको दालाली
पहिलो न्युजलाई प्राप्त यो अर्को तस्वीर हो । ट्याक्स कन्सलटेन्सी एन्ड सर्भिस सेन्टर नामक एक कन्सल्टेन्सीले आफूहरुले लेखापरीक्षण सम्बन्धी समेत काम गर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार, यस्ता सयभन्दा बढी कम्पनीले लेखापरीक्षण सम्बन्धी कामको दलाली गर्ने गरेका छन् ।